Banaadir Bandhig shaqo (Job Fair) oo Muqdisho lagu gaba gabeeyay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Banaadir Bandhig shaqo (Job Fair) oo Muqdisho lagu gaba gabeeyay
Xuseen Axmed 12 November 2016 12 November 2016
axaa Hotelka City Palace ee magaaladda Muqdisho lagu gaba gabeeyay Bandhig Carweedka shaqooyinka ee Banadir Job Fair, kii ugu ballaarnaa ee dalka lagu qabto, oo uu soo qabanqaabiyay Sanduuqa madaxa bannaan ee Fursad Fund, kaasoo ay kasoo qeyb galeen boqollaal dhallinyaro oo shaqo doon ah iyo shirkadaha dalka ugu waaweyn.
Carwada waxaa furay Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ku hadlayay magaca Guddiga Sare ee Sanduuqa Fursad Fund, waxa uuna ku baraarujiyay shirkadihii kasoo qaybqaybgalay inay u caddaalad falaan dadka shaqo doonka ah. Sheekh Bashiir waxa uu intaas ku daray in sanduuqa uu mar walba diyaar u yahay inuu ka qeyb qaato hawlaha shaqo abuurka ee dalka ka socdo.
Deeq Maxamed Afrika oo ah Agaasimaha Guud ee Fursad Fund oo warbaahinta u warramayay ayaa sheegay in ahmiyadaha laga leeyahay Bandhiggan oo ah kii ugu ballaarnaa ee dalka ka dhaca in ay yihiin in la abuuro madal ay ku kulmi karaan shaqo doonka iyo loo shaqeeyaha iyo in wax laga badalo nidaamka eexda iyo qabyaaladda ku dhisan ee shaqaalaha loo qoran jiray.
“Sida aan la soconno burburkii dalka ka dhacay wuxuu keenay in wax walba ay naga burburaan oo ay ugu horreyso kalsoonidii ay dadka isku qabeen. Taas waxay keentay in habka shaqaaleysiinta uu noqdo mid qaraabo kiil ku dhisan. Sidaa darteed waxaan u baahannahay in caqliyaddaas laga gudbo oo loo caddaalad sameeyo shaqaalaha shaqo doonka ah.” Sidaas waxaa yiri Deeq, waxa uuna intaa ku daray in shirkadaha kasoo qeybgalay ay dhammaan diyaar u yihiin in ay shaqaalo ka qortaan bandhiggan iyada oo lagu xulanayo kartidooda iyo aqoontooda.
Madaxa Suuq-geynta Shirkadaha ku mideysan Dahabshiil Group ee Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya Mudane Cabdiwahaab C/laahi Cilmi ayaa isaga oo ku hadlayo magaca shirkadda sheegay in ay bandhiggan ka qoran doonaan 50 shaqaale cusub ah oo ka hawl gali doona Adeegga E-Dahab ee telefoonnada lacagaha lagu qaato ah kaasoo laga hirgelin doono Muqdisho iyo Gobollada Koonfureed oo idil dhammaadka sanadkan.
Taniyo intii sanduuqan dhidibada loo taagay waxaa soo xarootay lacag gaareysa $41, 939.17 oo ay bixiyeen dad dhan 173 ruux. Dadkaasi qofka ugu yar wuxuu bixiyay $1 halka qofka ugu badan uu ku yaboohay $400 oo dollar. Waxaa mashaariic saddex oo la maalgeliyay ka faa’iideystay 102 ruux oo shaqooyin toos ah iyo kuwa dadban.
Furitaankii carwadda waxaa halkaas lagu bandhigay muuqaal kooban oo oo ka warbixinaaya waxqabadkii fursad fund mudada kooban ee uu socday. Mashaariicdaas la fuliyay waxaa ka mid ah mashruuc lagu taageerayo hooyooyinka khudaarta iyo hilib Ariga iibiya oo ay tiradoodu gaareyso 20. Kan labaad waa mashruuca Iskaashatada Naafada ee Baydhaba oo ah beer weyn oo 7 hiktar ah loo maalgaliyay iskaashato ka kooban 26 ruux kaasoo 4 hiktar oo kamid ah loo falay. Sidoo kale waxaa loo qoday ceel weyn, waxaana loo iibiyay matoor ay ku waraabsadaana beerta.
Mashruuca saddexaas waa kid dhanka beeraha ah, gaar ahaan dhisidda xarun casri ah (Greenhouse) oo lagu beeri doono miro iyo wax soo saar kala duwan oo dhanka khudaarta ah. Mashruucaan waxaa loo maalgaliyay hay’ad dalka guihiisa ka hawlgasha oo lagu magacaabo Somaliland Food Solutions oo ay ku mideeysanyihiin beeraleey leh xirfad beerasho oo casri ah kuwaas oo isku xilsaaray in ay xaliyaan dhibaatooyinka heysta beeraha iyo beerashada intaba.
Bandhigga Carwada Shaqooyinka ee Banadir Job Fair oo ah mashruucii afraad ee Sanduuqa Fursad uu fuliyo taniyo markii daaha laga rogay 27kii Febraayo 2016 waxaa lagu soo geba gabeeyay magaalada muqdisho ayado aay soo xaadiraan boqollaal dhallinyaro shaqo doon ah oo fursad u helay in ay ka qeyb qaataan.
War muriyeed kasoo baxay wada xaajoodkii Puntland iyo Galmudug”Sawiro